Luulyo | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Luulyo, 2011
Cadowga DM (No 1) af kudhiigle Fahad (Baidoanews.com) oo marwalba ka shaqeeya cadaawada DM.
Luulyo 30, 2011
Muqdisho Sabti, waxaa mudooyinkaan danbe aad u xoogeystey AFKUDHIIGLE Fu’aad oo isku magacaabey Fahad in uu marba qolo ama shakhsi weeraro hadii uu u arko waxii fikirkiisa gaaban kasoo horjeeda. Waxaa isweydiin leh goormaa AF KU DHIIGLAHAN loo dhiibey seeriga garsoornimada qowmiyadda.
Waxaan isku deyney mudo sanad ku dhow in aan u dirno odeyaal iyo dhalinyaro isaga la da`ah intiiba waano wanaag walaaltinimo waa ka diidey, ileen akhlaaqda fiican waxaa la baraa qofka inta uu yaryahay, mar hadii intaan uu la ekaadey cidna waxba kama qaban karto. Kadib markii cidwaliba ay ka quusatey, waano iyo u caqli celin ayaa dantu waxa ay nagu khasabtey in AF KU DHIIGLAHAN farta uu yaqaano laqoro si ummada ay nabad uga hesho waxaana inga go`an talaabo marka uu qaado in labo la la qaado.
Akhristayaasha sharafta leh waxaan idin soo bandhigeynaa dhowr arimood oo af ku dhiiglahan qowmiyadda DM dhexdeeda uu ka wado, kuwaas oo aan aad uga fiirsaney baaritaan dheerna ku sameyney ka dibna waxaa inoo soo baxdey arimahan hoosta ku qoran:
In uu hor istaago wixii uu ka dhexwaayo qabiil ahaan cida uu sheegto, kana dhigo waxba kama jiraan sida aad moodid in uu asaga yahay qaaliga ugu sareeya ee qowmiyadu leedahay.
Markuu damco in uu qolo aflagaadeeyo ama shakhsi waxa uu adeegsadaa magacyo uu asga u gaar ah sida KEEROW iyo IIDOW iwm si uu u xalaashado dhiiga ama cayda qofka ama kooxda uu markaas muraayada u soo gasha.
Intabadan waxa uu taageero buuxda u hayaa Al-shabaab amaba uu ku tiirsanyahayba, qof walba oo fikir ahaan kasoo hor jeesta qoladaasna waxaa uu kula dagaalamayaa wax alle iyo wixii uu heli karo aalad ah.
Wararka been abuurka ah ee uu soo qorey af ku dhiiglahan waxaa ka mid ah kii ugu danbeeyey oo ka mid ah kuwa uu qowmiyadda isaga horkeeno kuna abuuro tashwiish si uu cadowga ummada ugu faa’ideeyo.
Wuxuu ka been abuurtey kheyr Allah ha siiyee Sheekh Ilyaas oo ka fog waxa uu ku nisbeeyey, sababtoo ah waxaa uu falkan u sameynaayana ay tahay in uu ka dhex helo gudigan abaaraha ka dhisan UK qof ay isku hayb yihiin si Al-shabaab loo taakuleeyo maadaama dhaqaale xumo soo food saartey, asagooba isaga dhex qasan dhaqaalahan in uu yahay mid dadka tabaaleysan loo ururiyey iyo mid Al-shabaab loo ururiyey.
Waxaa kaloo cadaatey in ay ku wada heshiiyeen Af ku dhiigle (FU’AAD) iyo gacan ku dhiigleyaasha (Al-shabaab) sidii loo cirib tiri lahaa maatada ku nool goboladan la isku yiraahdo Koofur Galbeed Soomaaliya, gacan ku dhiigleyaashan ay hor istaageen caawinaadii la gaarsiin lahaa maatadaas nooc walba ha ahaatee hadii kale ayaga gacanta loo geliyo, waxaana kuu cadeyn ah in ay xitaa hor istaageen dadkii u soo nolol raadsan lahaa meelaha ay mucaawinada ka jirto, Af ku dhiigle Fu’aad-na isku dayohoyo mar walba in uu hor istaago lacagahan loo ururinaayo umadan abaarta haleeshey, hadii kale dhaqaalaha loo diro Al-shabaab, mar hadii taa la hor istaageyna uu baneystey in uu ka been abuurto dadka ka damqadey walaalaha abaarta haysato.
Waxaa wax lala yaabo ah qofka hunguri ka soo galey kaalmo loo ururiyey abaaraha oo weliba aanan joogin halka abaarta ay ka jirto ama meesha lacagta laga aruurinaayo, waxaa beryahanba uu wad-wadey Af ku dhiiglahan in gudiga abaaraha lagu daro dad ay isku hayb yihiin hadii kale uu fowdeyn doono banaamijkan xag Web-site-yada, baidoanews oo ku caan baxdey dabar goynta qowmiyada DigilMirifle iyo in ay hore u mariso dan hayb “Qabiil” sida ay dadka badankiis ay la wada socdaan.
Ugu danbeyn dadka uu ceybta u yeeley ma ahan kuwo u dhow waxa uu ku sheegey keliya uu fulinaayey balantii uu ka qaadey Al-shabaab iyo weliba haybtiisa, Anaguna waxaan leenahay ABAAR BAHAASE EEBA DORING.
Halkan hoose ka akhriso fadeexada oo af ku dhiiglahan la raadinaayo qowmiyadda dhexdeeda oo runtii waxba kama jiraan ah.
Marka maxaa u dan ah qowmiyadan hadiiba la ogaadey oo ay cadaatey af ku dhiiglahan noocaan ah in uu yahay cadowga koowaad ee ummadan leedahay?
1 Waa in aan la gelin web-kiisa si uusan suntan uu kula dhex wareegaayo qowmiyadda dhexdeeda looga bad baado
2. In waxba laga qaadan af ku dhiiglahan warkiisa, maxaa yeeley marwalba waxaa uu ka shaqeeya sidii loo kala fogeyn lahaa qowmiyadda.
3. In la baaro af ku dhiiglahan in uu run ahaan u dhashey qowmiyadda, maxaa yeeley dhowr jeer ayaa waxa ina soo gaartey in uusan qowmiyadda u dhalan balse deegaan ahaan u sheegtey.
Intaa ka dib waxaan idin balan qaadeynaa in aan soo bandhigno dhowr arimood oo af ku dhiiglahan khuseysa maxaa yeeley kan oo kale waa in maanta oo kale isku meel looga soo wada jeestaa.
Waxaan idin soo wadnaa dimbiyo badan oo AF KU DHIIGLAHAN uu geeystey.
Shariifka Oo Sheegey In Uu Dib U Bilowdey Howlgalkii Amaan
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka dhawaajiyay inuu dib u bilowday howl galkii dhinaca ammaanka lagu sugayay, isagoo sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dalka laga saaro Al-Shabaab iyo Al-Qaacida sida uu hadalka u dhigay.
Hadal uu ka jeediyay munaasabad shalay lagu dhaarinayay Wasiirada xukuumada cusub ayuu ka sheegay inuu dib u bilowday howl galkii Ammaanka, waxaana uu tibaaxay inay sii socon doonaan howl galadaas ilaa laga sameeyo horumar dhanka ammaanka.
Waxaa qasab noqotay lagama maarmaan ah in ammaanka la hormariyo, howl galadii dib ayay u bilowdeen in Al-Qaacida iyo Al-Shabaab dalkan laga xoreeyo, dadka guryahooda lagu celiyo, xataa waxaa imaaneysa in gar gaarka dadka guryahooda lagu gaarsiiyo”ayuu yiri Madaxweyne Shariif.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. C/wali oo hadal kooban bixiyay oo ku aadan dagaalka ayaa sheegay inay bilowdeen howl galkii Xukuumada, isagoo tilmaamay inay isku soo beegantay dhaarinta Wasiirada cusub iyo howl galka ay qaadeen Ciidanka Dowladda, isagoo tilmaamay in waajib uu ka saaran yahay in dalka laga xoreeyo Shabaab.
Si kastaba ha ahaatee hadalada kala duwan ee ka soo yeeray Madaxda Dowladda ayaa ah mid biyo qabow ku shubaya quluubta shacabka Soomaaliyed ee u hamuun qaba in dib guryahooda ugu laabtaan, mar hadii inta badan Magaalada ay gacanta ugu jirto Dowladda KMG.
Fanaan caan oo Mareykan ah oo maanta booqatay Xerooyinka Barakacayaasha Muqdisho
Fanaanada Mama Soul ayaa booqatay maanta Xero ay ku suganyihiin barakacayaal oo ku taalo Muqdisho, kadib markii ay soo gaartay caasimada Soomaaliya.
Taangi ay leeyihiin Ciidamada AMISOM oo ku gubtay meel ku dhow Dugsigii Maxamuud Xarbi (Daawo Sawiro)
Dagaalo qaraar oo xoog leh oo ka dhacay magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxay Xarakada Al Shabaab ay ku gubtay mid ka mid ah Taangiyada Ciidamadda Amisom.
Ciidamadda sida gaarka ah u tababaran Xarakada Al Shabaab ee loo-yaqaano Xisbada ama Kumaandooska ayaa waxay xalay weeraro rogaal celin ah ay ku soo qaadeen Ciidamadda Dowladda iyo Amisom, isla-markaana waxay ku gubeen mid ka mid ah Taangiyada Ciidamadda Amisom.
Dagaalada ka dhacay degmada Wardhiigleey ayaa waxaa hareer socday ruux naftii hore ah oo isku qarxiyay goob ay ka dhawaayeen Ciidamadda Dowladda iyo Amisom, hase ahaatee qaraxaasi ayaanan jirin wax khasaaro ah oo uu geystay.
Dagaaalada ayaa waxaa kaloo hareer socday madaafiic xoog leh oo si weyn loogu garaacay deegaanada ay kala jooggeen labada dhinac, waxayna dagaaladu ay geysteen khasaarooyin kala duwan.
Afhayeenka Ciidamadda Xarakada Al Shabaab Sheekh Cabdi Casiis “Abuu Muscab” ayaa wuxuu sheegay inay dilleen ciidamo badan oo ka tirsan Dowladda iyo Amisom, isla-markaana wuxuu sheegay in xalay ay gubeen mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee Ciidaamadda Amisom.
Abuu Muscab ayaa wuxuu tibaaxay inay sii wadi doonaan dagaalada qaraar ee ay kula jiraan Dowladda Soomaaliya iyo Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom, isla-markaana wuxuu sheegay in saacadaha soo socda ay qaadi doonaan dagaalo hor leh.
Sidoo kale wuxuu ugu baaqay guud ahaan Ciidamadda Xarakada Al Shabaab inay shaqeystaan Janno, isagoo hoosta ka xariiqay inay heystaan farsado badan oo ay ku wiiqi karayaan cadowga, waa sida uu hadalka u dhigay’.
ABAARAHA LAGU HOOBTAY, HALAAGGAA SHACABKEENNA; HORMUUD WEY KA GARGAARTEE, DAHABSHIIL MA HUNUUD BAA?!!!
Luulyo 29, 2011
Shariikadaha Xawaaladaha waxay dhaqaalaha faraha badan ee soo gala ka helaan Shacabka Soomaaliyeed oo ay 5% khidmad ahaan kaga goostaan lacag kasta oo la soo marsiiyo Xawaaladahooda, waxayna sanad kasta helaan faa,iido kor u dhaafeysa boqollaal malyuun oo doollar oo ay Accountiyo ay dibedda ku leeyihiin ku shubtaan.
Shariikadaha Xawaaladaha ee ka howl gala Soomaaliya waxay kor u dhaafayaan soddomeeyo, hase yeeshee labada Shirkadood ee ugu waaweyn waxay kala yihiin HORMUUD & DAHABSHIIL. Shariikadahaani waxay kamid ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee bilaabay iney xawilaan lacagaha ay dadkii Soomaaliya ka soo qaxay ee qurbaha soo galay u dirayeen eheladooda weli ku sii sugnaa gudaha wadanka, kadib burburkii Xukuumaddii dhexe ee 1990-kii.
HORMUUD:Bartamihii sagaashameeyadii ayaa Shirkadda Hormuud oo xilligaasi wadatey magaca Albarakaat, waxay Adeeggii Xawalaadda ku kordhisey Adeegyo kale sida; Telefonnada loo yaqaan landlineka iyo dhismaha guryo ay ugu talo gashay shaqaaleheeda oo mushahaarooyinka ay qaataan si tartiib tartiib ah looga jarayo.
Iyadoo ay Abaaro ba,an ay haataan ku dhufteen guudahaan dalkeenna inta badan Shacabkeenana ay la ildaran yihiin Harraad, Gaajo, Cudurro; ayaa Shirkadda Hormuud Waxay kaalin mug leh ka qaadatay gargaarka deg degga ah ee lala gaadhayo Shacabka dhibaatadu haleeshay, waxaana Shirkaddu ay Raashin, Biyo, iyo Agab kale ka qeybiyeen Xeyo barakacayaasha leysugu geeyey oo ku kala yaala Shabeelaha Hoose, iyo Gobolka banaadir.
Shirkadda ayaa hore dhowr jeer sidaan oo kale Raashin, Xoolo nool, iyo bacaha laga dugsado Roobabka iyo dhaxanta ugu qeybisay qoysas fara badan oo ka soo barakacay degaanadoodii.
DAHABSHIIL: Shirkadda Dahabshiil ayaa iyaduna waqti xilliyadaas ku dhow waxay bilowday iney ganacsigeedii ku kordhiso soo dejinta qalabka dhismaha sida; biraha shubka, Sibidhka ama Shamiitada, Qalabka korantada iyo agab kale oo kala duwan.
Shirkadda Dahabshiil oo faa,iidada ka soo gasha Xawalaadda inta badan ka hesha koonfurta Soomaaliya, islamarkaasna dhaqdhaqaaqa ganacsigeeda inta badan uu ka socda koonfurta Soomaaliya, ayaa waxay u egtahay iney hal-heys ka dhigatay: “KA MACAASH, HANA U MACIININ”.
Ilaa iyo iminka Shirkadda Dahabshiil wax gargaar ah Sako iyo Saddaqaba ha noqotee oo ay u fidiyeen Shacabka ay musiibadu halakeysay lama hayo, waxaana halkaasi ka muuqda in Shirkadda Dahabshiil aaney ugu HAMBEYN sidii ay ugu LISEEN shacabka tabaaloobey ee ay boqollalka Malyuun ee Doollar dushooda ka sameysay Shirkaddaan naxariista daran ee DAHABSHIIL AMA DHIIGSHIIL.
Shariikadahaan oo labaatankii sanadood ee la soo dhaafay si xad-dhaaf ah u maaleystay, ayaa ganacsigoodii oo wejiyo badan yeeshay wuxuu gaadhey gobolka geeska Afrika iyo gacanka Khaliijka, waxaana ganacsigoodu uu haatan si xowli ah uga socdaa Soomaaliya, Itoobiya, Kenya, Djbuuti, UAE, KSA, & Wadamo kale, waxayna Xarumo waaweyn ku leeyihiin Shanta qaaradood ee Caalamka.
Xilligaan la joogo waxaa Waddankeena ka taagan Abaar ba,an oo dad iyo duuyo baabi`say; Harraad, Gaajo, iyo Cudurro kala duwan oo macluushu sababtay ayaa waxaa u le,anaya Carruurtii Dumarkii iyo dadka da,da ah, waxaana si argagax leh ku socda qax iyo barakac baahsan oo aan hore loo arag.
Musiibada maanta dadkiinii ku habsatey waxay u baahantahay iskaashi ay la yimaadaan inteena uu weli dhaqdhaqaaqu ku dambeeyo ama hantida heysta, gargaar deg deg ahna loo fidiyo shacabkeena ka soo daaley dagaallada aan ujeeddada lahayn, laakiin xilligaan qarka u saaran iney tirtirmaan.
Shabaabka Qasaxdheere Oo Isku Khilaafey Lagaco Ganacsato Laga Aruuriyay,
Luulyo 28, 2011
Horjoogayaasha Al-Shabaab ee degmada Qansaxdheere ee gobolka Baay ayaa lagu waramayaa in uu khilaaf soo dhex galay, kaddib markii ay ku heshiin waayeen lacago baad ah oo ay ka qaadaan ganacsatada deegaanka.
Mid ka mid ah Ciidamada oo codsaday in magaciisa la qariyo sababo ammaan darteed ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeyay horjoogaha degmada iyo kan maaliyadda, islamarkaana uu salka ku hayo qeybsiga lacago lagu soo Aruuriyay ganacsatada deegaankaas laga qaado.
Ninkaan ka tirsan Al-Shabaab ayaa sheegay in horjoogayaasha midba midka kale uu ku eedeynayo in uu lunsado baadda uga soo xaroota degmadaasi iyo midda ay ka qaadaan gawaarida isticmaasha waddada isku xirta magaalooyinka Qansaxdheere, Baardheere iyo Baydhabo.
Midowga Yurub Oo Kordhinaysa Gargaarka
Madaxa midowga Yurub u qaabilsan wax ka qabashada dhibaatooyinka Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in midowga Yurub ay kordhin doonaan gargaarka ay u fidinayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan geeska Afrika.
Kristalina Georgieva oo booqanaysay dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub uu si deg-deg ah u bixin doono €28 million euro ah oo u dhigmata $40 million oo dollar ah, xilli sanadkaan gobolka ay horay ugu deeqeen €70 million euro ah.
Madaxa midowga Yurub u qaabilsan wax ka qabashada dhibaatooyinka ayaa sheegtay in deeq deeraad ah ay bixinayaan waddamada midowga Yurub, iyadoo intaasi ku dartay in ay isku duwayaan gargaar dheeraad ah oo dadka wax loogu qabto, kaddib markii ay booqatay xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in cunno yari ay ka jirto laba gobol oo ka mid ah Soomaaliya, islamarkaana ay dhici karto in cunno yarida iyo abaarta ay sii ballaarato.
Sedexdii Mas`uul Ee Lagu Basaasey Cariga Saudi Arabia Oo Weli Xiran.
Luulyo 27, 2011
Waxaan maalmo ka hor idinku war geliney in sedex mas`uul oo u dhashey qowmiyada DigilMirifle lagu xirey cariga Saudi Arabia, kuwaas oo lagu basaasey in ay Al-shabaab lacago u aruurinayeen, iyaga oo runtii ku dhex jireen aruurinta lacago loogu talagaley abaaraha ka jira wadanka khaasatan goboladeena.
Akhristeyaasha ku xiran web-kan waxaan idin soo gudbineynaa dhowr arimood oo soo shaac baxay kuna saabsan Arimaha odeyaashan lagu xir xirey wadanka Saudi Arabia laguna basaasey in ay yihiin Al-shabaab, Sida lala socdana waxaa ka danbeeya xariga sedexdan qof ninka lagu magacaabo Cumar Boongo falkan uu ku kacayna uu yahay mid wuxuushnimo ah.
Xiriiro aan la sameyney jaaliyada ka soo jeeda Koofur Galbeed Soomaaliya ee ku nool wadanka Saudi Arabia si aan u ogaano waxyaabaha ku kalifey in uu ku koco falkan foosha xun oo qof walboo damiir leh, islaamnimo iyo bani`aadan nimada xitaa ogoleyn in heerkaas la isla gaaro.
Waxaan jecelnahay marka hore in aan idin sharaxno sedexda mas`uul sida ay kala ahaayeen iyo waxa ay inoo sheegeen dadkii ku ag dhowaa iyo jaaliyada inteeda kaleba.
Sedexda mas`uul midkood waxa uu ahaa sida aan markii horeba idininku wargeliney gudoomiyaha Jaaliyada DigilMirifle ee Saudi Arabia, noqdeyna ka dib markii laga qaadey jegada gudoomiyenimo qofka falkan ku kacay.
Labada kalena waxa ay ahaayeen mucaaridkiisa ugu waaweyn oo ka soo shaqeeyey in Boongo laga qaado jagada gudoomiyenimo.
Dhacdadan foosha xun markey dhaceysey sedexdan odey waxa ay ku guda jireen lacago ururin oo la doonayey in lagu taakuleeyo walaalaha tabaaleysan ee abaartu aafeysey, dembiilaha falkan sameeyey wuxuu cadeystey cadowtanimada uu u hayo qowmiyadan, sababtoo ah dadka uu xirey ma ahane wuxuu hor istaagey in la taakuleeyo shacabkan dhibaateysan ee abaarta wax yeeleysey.
Jaaliyada inteeda kale eek u nool Saudi-ga waxaa amakaag ku noqotey dhacdadan ayna leeyihiin weligeen inama soo marin tan oo kale, qofkana waxa uu dhaawacey qalbigeena, taaba waxaa inooga daran ayey yiraahdeen qof waliba gurigiisa ayuu ku ekaadey in aan isu imaano oo ka wada arinsano xaaladan adag ee ay ku jiraan dadkeena iskaba daaye, hamigaan hayney in aan wax u qabano dadkeena waxaa bur-buriyey Cumar Boongo.
Ugu danbeyn waxaan aduun weynaha ogeysiineynaa gaar ahaan qowmiyada Digilmirifle in Cumar Boongo uu gacan ka geystey xasuuqa shacabka Koofur Galbeed Soomaaliya, iyo Reer badan uu aabo la’aan dhigey oo Saudi Arabia degan.
Waxaan jecelnahay in aan idin soo gudbino wixii ku soo kordha arima odeyaashan iyo waxaa kale oo ku mashquulsanahay aruurinta cadeymaha ninkan lagu hayo iyo in aan asaga naftiisa wareysi layeelano hadii uu inaga ogolaado waxaan idinku soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan Insh Allah.
Shabakada http://www.swsomalia.com iyo waajid.wordpress.com kala soco wixii ku soo kordh arimahan.
Inta U Dhexeysa Buulo Xaawo Iyo Mandheera Oo Ka Dhacay Qaraxyo Is Daba Joog Ah.
Qaraxyo xoogan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ka kala dhaceen Degmada Beledxaawo iyo magaalada Mandheere ee dalka Kenya Soohinta kala qaybisa.
Qaraxyadaan ayaa la sheegay in ay haayeen labo Qarax oo is xig-xigay kuwaasi oo ahaa Qaraxyada meelaha fog fog laga hago waxaana la sheegayaa in siweyn looga maqlay gudaga degmada Beledxaawo.
Qaraxyadaan ayaa waxaa lala eegtay ciidamada amaanka ee wadanka Kenya kuwaasi oo ku sugnaa Soohdinta kala qaybisa degmada Beledxaawo Soomaaliya iyo magaalada Mandheere ee dalka Kenya.
Wali lama oga inta uu la egyahay Khasaaraha ay geesteen qaraxyada xoogan ee goor dhow ka dhacay degmada halkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay howlgalo samaynayaan xiligaan waxaana dadka goobjoogayaasha ah ay ku waramayaan in ay arkayeen ciidamada oo dadka qaar qab qabanaya.
Ban Ki Moon Oo Ugu Baaqay Dalalka Carabta Kordhinta Deeqaha.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa ugu baaqay dalalka Sacuudiga, Qadar iyo Kuweyt in ay kordhiyaan deeqaha loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ku dhufteen.
Ban Ki Moon ayaa war qoraal ah oo xafiiskiisa ka soo baxay lagu sheegay in dowladaha carabta ee la xusay laga sugeyo in ay qeyb libaax ka qaataan sidii loo yareyn lahaa macluusha ka taagan Soomaaliya.
Mr. Moon ayaa waydiistay wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdullaahi Bin Sayid Al-nahyaan, in dalkiisa uu si deg-deg ah ugu jawaabo codsiyada lagu doonayo in wax looga qabto macluusha Soomaaliya.
Baaqa Ban Ki Moon ayaa ku soo beegmay maalin kaddib markii Sacuudiga uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in lacag dhan 60 milyan oo doollar ay ugu yaboohayaan dadka abaaraha waxyeellada u geysteen.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Luulyo, 2011.